ကျွမ်းကျင်သူ ၇။ CMS ရွေးချယ်ရာတွင်သင်သိသင့်သော Surefire SEO အခြေခံလိုအပ်ချက်များ
အွန်လိုင်း application တော်တော်များများတွင်ကောင်းမွန်သော Content Management System (CMS) သည်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်မလုပ်ဆောင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ခြားနားမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ မည်သည့်အွန်လိုင်းအီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုကိုမဆိုချဉ်းကပ်မှုဖြင့်သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များထက်အသွားအလာရရှိရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်တွင်ထိပ်ဆုံးနေရာကိုသင်အာမခံသည်။ ဤသည်မှာကုမ္ပဏီများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းဖောက်သည်များကိုအများဆုံးရှာဖွေရန် Search Engine Optimization (SEO) ကိုရှာဖွေရခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ ကောင်းသော SEO နှင့် SMM သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်လိုအပ်သည်။ အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အများစုသည်နာမည်ကောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်ရောင်းအားကျဆင်းခြင်း (သို့) ဂူဂဲလ်တွင်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
CMS ကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ ဂူဂဲလ် ၏ဝယ်သူအောင်မြင်သူဖြစ်သောမက်ဘဲလ်မှအောက်ပါအချက်များကိုစဉ်းစားပါ။
၁။ H1 အညွှန်းများ၊ စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များနှင့် meta ဖော်ပြချက်များ
၀ ဘ်ဆိုဒ်များကသင့်ဆိုဒ်ရှိအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ညွှန်းရန် Google bot များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအရာများသည်သင့် site ကို crawlers မြင်သောအရာများဖြစ်သည်။ h1 tags များ၊ စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်အချက်အလက်သို့မဟုတ် meta ဖော်ပြချက်များကိုမည်သို့တည်းဖြတ်ရမည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။ ဤရွေ့ကားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သင်ကောင်းတစ် ဦး အလုပ်လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရရှိရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။
2. ပုံများအတွက် Alt attribute တွေသုံးနိုင်ခြင်း
၎င်းသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပြုလုပ်သောပညာရှင်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးအခြေအနေအပြီးတွင်ဆိုဒ်၏တုန့်ပြန်မှုသည် SERP တွင်ဆိုက်တစ်ခု၏သက်ရောက်မှုများထဲမှအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ သင်ရွေးချယ်သော CMS သည်စာမျက်နှာတစ်ခုစီပေါ်ရှိ display status ကဲ့သို့သောကုဒ်များကိုကာကွယ်သင့်သည်။ ၎င်းသည်စာမျက်နှာများကိုအထူးသဖြင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် တင်၍ အရှိန်လျှော့ချနိုင်သည်။
သင့်အနေဖြင့် template ၏အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲစာမျက်နှာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခွင့်ပြုသည့် CMS တစ်ခုကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ UX ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ အချို့သောတင်းပလိတ်များသည်ကြည့်ရှုမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အသေးစားပြောင်းလဲမှုများလိုအပ်နိုင်သည်။
၅။ URL ဖွဲ့စည်းပုံကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရမည်
SEO ကိုအောင်မြင်ရန်သင်ရွေးချယ်သော URL ဖွဲ့စည်းပုံသည်ကျိုးကြောင်းမဲ့ကုဒ်များအစားအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောစကားလုံးများပါရမည်။ အခြားရှုထောင့်များတွင်ဘာသာစကားများစွာလိုအပ်လိမ့်မည်။
6. Canonical ပြproblemsနာများနှင့်ထပ်တူအကြောင်းအရာ
အလားတူ URL တစ်ခုကို link တစ်ခုထက်ပိုသောအခါပြနာတက်သည် ရလဒ်အနေနှင့်ပေးထားသောသော့ချက်စာလုံးများသည်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာကိုအဓိကညွှန်းသည့်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုပြသနိုင်သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲပါဝင်သောအကြောင်းအရာသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို၎င်း၏မိတ္တူကူးထားသောစာမျက်နှာများနှင့်ဝေမျှစေသည်။ ဤအမှားသည်စာမျက်နှာတစ်ခု၏အခွင့်အာဏာကိုလျော့နည်းစေပြီးပြိုင်ဘက်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုလျှော့ချသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ အပြည့်အဝစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်နှင့်ထပ်နေသောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတွင်းရှိအကြောင်းအရာများကိုဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ၃၀၁ လမ်းကြောင်းမှတဆင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏ CMS သည်ဤလုပ်ဆောင်မှုများကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
7. Add-ons တွေ၊ plugins တွေနဲ့ module တွေ
မည်သည့် CMS တွင်မဆိုအလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည် SEO သို့မဟုတ် WordPress ကဲ့သို့သော plugins များကို enable လုပ်နိုင်သည်။
အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအောင်မြင်ရန်အတွက်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး ၏ကွာဟချက်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကိုက်ညီရန်လိုသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်နည်းတစ်နည်းမှာစာမျက်နှာသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမြှင့်တင်ရန်အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ SEO ဆိုသည်မှာလျှောက်ထားရန်ကောင်းသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြproblemနာမှာ Content Management System နှင့်သင်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်သည်။ အထက်ပါလမ်းညွှန်၏အကူအညီဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါသော့ချက်သောအရာများပါဝင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။